ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - တက်ကြွတဲ့စိတ် | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 26/11/2021 21:52 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, fit, ကျန်းမာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဝတစ်ခုလုံးသည် စိန်ခေါ်မှုနှင့် တိုးတက်မှုကို အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ဒိုင်းနမစ်များကို ကိုင်တွယ်ကြသည်။ ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ အခြားသူများ သည် မသန်မစွမ်းသောကမ္ဘာတွင် ရှင်သန်ရန်သာလိုသည်။ ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို စိတ်နေသဘောထားတွေ၊ ဆန္ဒတွေနဲ့ အတွင်းစိတ်ခံစားချက်တွေ ဝင်လာမလဲ။
ဟင်းချက်နည်းတွေရှိတယ်။ လူတွေကို လမ်းပြနိုင်တယ်။ ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လူအများ၏အောင်မြင်မှုများ သူတို့ဟာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ သို့သော် တစ်ဖက်တွင်မူ ၎င်းတို့သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို နင်းချေပြီး အန္တရာယ်ပြုခဲ့ကြသောကြောင့် ထိုနည်းဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
1 နေ့တိုင်း ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
2 ကျေးဇူးသိတတ်မှုနှင့် စေတနာရှိမှုအပေါ် လုပ်ဆောင်ပါ။
3 ပြဿနာတွေကို ရပ်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ပါ။
5 မင်းထင်တာကို လုပ်ရမှာ မကြောက်ပါနဲ့။
6 ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
နေ့တိုင်း ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
အရေးကြီးတာက သင့်ကိုယ်သင်အတွင်းထဲသို့ဝင်ပါ။မင်းရဲ့ အတွေးတွေကို အဆိပ်သင့်စေမယ့် အဲဒီ ခရုပတ်ထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားပြီး ဒီအတွက် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကို လုပ်ဆောင်ရမယ်။ ဖြင့် စတင်ကြည့်ပါ။ ကြေးမုံဥပဒေကို ကျင့်သုံးခြင်း၊ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်စုံတစ်ခုက သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် အဲဒါက သင်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲသင့်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖန်တီးမှု စိတ်ကူးနဲ့ တရားထိုင်ရင် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့တာလုံး t အတွက် နေရာတစ်ခုခု ရှာရမယ်။ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အဲဒီ့အချိန်လေးကို နေ့တိုင်းရှာပြီး ကိုယ့်အတွင်းပိုင်းကို မြင်ယောင်နိုင်ဖို့ မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားလိုက်ပါ။ တရားထိုင်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းခန်းကို မြင်ယောင်နိုင်ပြီး ၎င်းကို နေ့စဉ်အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ဤနေရာတွင် စတင်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စတင်မြင်ယောင်ခြင်းသည် အစပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပါ။. ဤနေရာမှ သင်သည် ပို၍ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတရား။
ကျေးဇူးသိတတ်မှုနှင့် စေတနာရှိမှုအပေါ် လုပ်ဆောင်ပါ။
ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းသည် အကောင်းမြင်စိတ်ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးအတွက် အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်မျှပင်သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးကို တန်ဖိုးထားတန်ဖိုးထားခြင်းသည် ထိုကျေးဇူးတရားကို ခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ချမ်းသာစေသည်။ ထို့အပြင် လူတစ်ဦးသည် သင့်အပေါ် ပြုမူသော မည်သည့် လုပ်ရပ်မျိုးမဆို အမြဲဖြစ်ရမည်။ ကျေနပ်ပြီး မချုပ်တည်းနိုင်။ အဲဒီလူက သင့်အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်။
ထိုနည်းအတူပင် ကျွန်တော်တို စေတနာ, အကျင့်ကိုကျင့် ဘာကိုမှ ပြန်ရဖို့ မစောင့်ဘဲ. စေတနာရှိမှု၏ လုပ်ဆောင်မှုနည်းလမ်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီမှ ခံယူရမည့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒီအပြုအမူကို ထိန်းသိမ်းတာက ရေရှည်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် သုခကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။.
ပြဿနာတွေကို ရပ်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ပါ။
ဘဝမှာ ကြုံလာရတဲ့ ပြဿနာအများစုဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ထားမသွားပါဘူး။ လမ်းကြောင်းမှန်အောင် ပို့ပေးပါ။ ငါတို့ခေါင်းထဲကမထုတ်ရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ကျန်ငွေသည် အတွင်းမှ စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိတ်မှမြင်ကွင်းများကို အဆက်မပြတ်သတိရနေပါက သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာများကို မိမိကိုယ်ကို နှိပ်စက်နေပါက၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးခေါင်းကို ပစ္စုပ္ပန်နှင့် ထိန်းကျောင်းပြီး ကြီးစွာသော ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် လေ့ကျင့်ရပါမည်။ (ဤကိစ္စများအတွက် တရားထိုင်ခြင်းသည် အလွန်ကောင်းပါသည်)။
ဤအချက်သည် အရေးကြီးပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် အစွန်းရောက်သမားဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သောအရာများအကြောင်း ပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စိတ်ရှုပ်မခံပါနှင့်။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ အချင်းချင်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ မာန်မာနဖြင့် ချစ်ခြင်း။ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းခံရသည့်အရာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မည်သည့်မှတ်ချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိစေရန်။ သင်မကောင်းတာတစ်ခုခုကို တခြားသူတွေ သတိပြုမိရင်၊ အဲဒါက သူတို့ကို စွမ်းအားနဲ့ ပေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည် သင့်တုန်ခါမှုကို လျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့မဖြစ်စေရန်အတွက် စစ်မှန်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းထက် ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။
မင်းထင်တာကို လုပ်ရမှာ မကြောက်ပါနဲ့။
လူအများ ငြိမ်ငြိမ်နေ၊ နှစ်တွေကုန်သွားကြတယ်။ အခြားသူများ မမြင်နိုင်ပါ။ ဒါက မင်းရဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူး ဒါမှမဟုတ် မင်းလည်း လေ့ကျင့်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။
အဲဒီအတားအဆီးကို ခုန်ချဖို့ တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ မလုပ်ဝံ့တာတွေကို လုပ်ရဲတယ်။ မင်းအသက်ရှင်နေချိန်မှာ မသေစေရဘူး။ အရင်က မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရတဲ့ အရာအားလုံးကို မြင်ယောင်နိုင်ပြီး အဆုံးမှာ ကောင်းကောင်းအကူအညီဖြစ်လာတဲ့အခါ သင်အများကြီးပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
အကောင်းမြင်တတ်ဖို့ လိုပြီး အဲဒါကို လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘဝကို အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ တခြားအတွေးအမျိုးအစားတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး အာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြသနာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးအမြင်များကို ထိုမကောင်းတဲ့ စွဲချက်အားလုံးကို အာရုံစိုက်ပါသည်။. မင်းရဲ့တွေးခေါ်ပုံလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို အာရုံစိုက်ရပါမယ်။
အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို အာရုံစိုက်တာက ဘာကြောင့် မကောင်းတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေရှည်တွင် သင့်ဦးခေါင်းသည် အလေးချိန်ရှိသော အရာတစ်ခုခုကို ဖမ်းမိနိုင်သောကြောင့် သင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေ၊ မကောင်းတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖြစ်စေတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ရှိပါစေ။ ၎င်းတို့သည် သင့်စိတ်ကို ပျော်ရွှင်စေရန် အကောင်းဆုံး အဆိုပြုချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကောင်းကောင်းစားပြီး အထိုင်မထဘဲ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်တဲ့သူက လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Stress ကို ရင်ဆိုင်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါက သင့်ကို အပျက်သဘောမတွေးဖို့လည်း ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးတာက သင့်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။ ဤနည်းဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်၏ ကောင်းကျိုးအတွက် ဤရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် သင်သည် လူကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » ကျန်းမာခြင်း » ပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။